अर्थ – Kumbha Khabar
Babita	 २५ भाद्र २०७६, बुधबार १६:३३ 0
Babita	 २४ भाद्र २०७६, मंगलवार १२:४० 0
अन्तरवार्ता अन्तराष्ट्रिय खेलकुद पत्रपत्रिका फिचर भिडीयो मनोरन्जन
Babita	 २० भाद्र २०७६, शुक्रबार १३:१३ 0
काठमाडौं । सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा १४ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार यो गिरावट आएको हो । महासंघले शुक्रबारको लागि छापावल सुनको खरिद बिक्री मूल्य प्रतितोला ७२ हजार रुपैयाँ…
८ सय ४८ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनी रहने (सूचीसहित)
Babita	 १९ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:२४ 0
काठमाण्डौ – अब देशमा ८ सय ४८ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनी रहने भएका छन् । १५ सयभन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएकामा अब ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले मात्रै सरकारले अनुमति दिएको गन्तव्य देशमा कामदार पठाउन पाउने छन् । सरकारले धरौटी रकम बुझाउन दिएको…
सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार पाँच सय रुपैयाँ
Babita	 १८ भाद्र २०७६, बुधबार १३:१० 0
काठमाडौं । सुनको मूल्य पुनः बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । तेजावी सुन भने प्रतितोला ७३ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो (मंगलबार) प्रतितोला ७२ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको सुन आज तोलामा एक हजार…
भारतीय मुद्रा यस बर्षकै कमजोर
Babita	 १८ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:३९ 0
नयाँ दिल्ली (भारत) । मंगलवार भारतीय मुद्रा रुपयाको भाउ अमेरिकी डलरको तुलनामा सन् २०१९ कै कमजोर बनेको छ । मंगलवार प्रतिडलर भारूको विनिमय दर ७२ रुपयाभन्दा बढी पुगेको छ । भारतको सुस्ताउँदो अर्थतन्त्रको नतीजा तथा विश्व बजारमा बलियो बन्दै गएको…
राष्ट्र बैंकले १ अर्ब मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने
Babita	 १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १३:२० 0
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले उक्त रकममध्ये १ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा लगानी गर्नेछ । यस्तै, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुमा…
म्याच फिक्सिङ गर्ने लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विधेयक संसदमा प्रस्तुत
Babita	 १६ भाद्र २०७६, सोमबार १६:२० 0
सरकारले खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडी र खेलाडीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा तीन वर्ष कैद र रुपैयाँ तीस हजारसम्म जरिबानाका साथै…
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता
Babita	 १६ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:३५ 0
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा यो ५० प्रतिशत कम हो। यसरी फिर्ता गरिएको करमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मात्रै समावेश छ। फिर्ता उठाएको कर खरिदमा तिरेको करमा मिलान नभइ…
धान रोपाइँ सकियो ,
Babita	 १५ भाद्र २०७६, आईतवार ०९:१८ 0
मुलुकभर यो वर्षको वर्षे धान रोपाइँ सकिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष धान खेतियोग्य जमिनमध्ये ९४.८३ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ । यो तथ्यांक गत वर्षभन्दा ७० हजार ८७६ हेक्टर अर्थात् ०.५६ प्रतिशत कम रोपाइ भएको छ ।…
अमेरिकाले आजदेखि चिनियाँ सामानमा नयाँ कर लगाउने
Babita	 १५ भाद्र २०७६, आईतवार ०८:४१ 0
वाशिङटन । अमेरिकाले आज आइतबारदेखि लागु हुने गरी ११२ बिलियन डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा नयाँ कर लगाउने भएको छ । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रमा चलिरहेको व्यापार युद्धलाई यसले झन् चर्काउने सम्भावना छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले…
तपाईँ कार किन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ? (मूल्य सूचीसहित)
Babita	 १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:४८ 0
काठमाडौं– तपाईँ कार किन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ? कुन कार किन्न ? कस्तो खालको किन्ने ? कति मूल्यको किन्ने ? यी सबै थाहा पाउन कहाँ जाने ? कार किन्दै हुनुहुन्छ भने पहिले आवश्यकता र बजेट एकीङ गर्न सल्लाह दिन्छन् नाडा अटो शो–२०१९ का…